Seychelles manafosoka loka maharitra ho an'ny fizahan-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Seychelles manafosoka loka maharitra ho an'ny fizahan-tany
Ho an'ny taon-dasa faharoa, Seychelles mahazo ny voninahitra ho satro-boninahitra satro-boninahitra ho an'ny fizahan-tany maharitra maharitra any amin'ny Ranomasimbe Indianina amin'ny faha-27 taonan'ny World Travel Awards.
Ny fanjonoana amin'ity taona ity dia mampiroborobo indray ny nosy nosy hatsaran-tarehy voajanahary azo antoka, ho an'ny tendron'ny sehatry ny tontolo ekolojika ho an'ny taona 2020 manohitra ireo mpifaninana aminy, Madagascar, Maldives, Mauritius ary ny Nosy Réunion.
Marina tokoa, "Tontolo iray hafa", i Seychelles mifikitra amin'ny lazan'ny toerana fialan-tsasatra an'izao tontolo izao miaraka amin'ny fanintona voajanahary tsara ary mametraka ezaka mafy amin'ny fiarovana ireo nosy.
Raha niresaka momba ny voninahitry ny fahazoana ny loka fanindroany tao anatin'ny roa taona, ny Seychelles Tourism Board (STB), ny Lehiben'ny Executive Rtoa Sherin Francis dia nanamafy ny fahavononan'ny tanjona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
“Voninahitra lehibe ho anay ny toerana kely halehanay raha nekena ho toy ny iray miavaka amin'ny faharetana. Amin'ny maha-toeran-kaleha anay, dia avonavonay ho tonga aingam-panahy ho an'izao tontolo izao. Ity loka ity dia ho an'ny Seychellois rehetra izay miezaka mafy hanome anjara biriky lehibe amin'ny fiarovana ny karazan-karazan'olona tandindomin-doza sy ny toeram-ponenany ary amin'ny fiarovana ny rafitra ekolojika. Ny eritreritro dia mankany amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny indostria miezaka ny hitazona ny fenitry ny fanaon'izy ireo. Anisan'izany ireo mpiaro ny tontolo iainana, ONG ary tia natiora mba hanonona vitsivitsy fotsiny, izay naharitra sy naharitra tamin'ny fitazonana ny nosintsika amin'ny toerana madio ", hoy Ramatoa Francis.
Fantatra amin'ny hatsaran-tarehiny madio i Seychelles ka nanao iraka hitahiry ny paradisa ivelany sy ny lova voajanahary manan-karena amin'ny alàlan'ny fomba fanao maharitra sy fepetra.
Ny Nosy Seychelles dia tsy vitan'ny hoe manintona mpitsangatsangana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fandreseny io loka io fa koa hanome aingam-panahy ireo firenena lehibe handray ny iraka faharetana eo ambany elany.
Ny mpandresy hafa tamin'ny World Travel Awards tamin'ity taona ity dia misy an'i Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa ho an'ny 'Resort Indian Ocean's Leading Villa Resort', Air Seychelles ho an'ny 'Air Ocean's Leading Airline', ary Seychelles Travel ('Operation Tour an'ny Ocean Ocean').
Hatramin'ny nananganana azy, ny World Travel Awards dia mankalaza ny hatsarana amin'ireo sehatra lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, fizahan-tany ary fandraisam-bahiny ary ekena ho fanamarinana faratampon'ny hatsaran'ny indostria.
Taorian'ny fikarohana nandritra ny herintaona ny marika malaza amin'ny fitsangatsanganana sy ny fandraisam-bahiny, ny matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany ary ny latsa-bato ampiasain'ny besinimaro, izay nahazo ny loka indrindra tamin'ny sokajy voatondro ho mpandresy.
Ireo mpandresy ireo dia nanasa ny Andron'ny mpandresy ranomasimbe Indiana tamin'ny talata 10 novambra 2020, izay naneho ny tsara indrindra amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ho an'izao tontolo izao.
Ny fanantenana ny famerenana amin'ny laoniny ny indostria dia mamiratra amin'ny isan'ny isam-bato azon'ny besinimaro ho an'ny World Travel Awards amin'ity taona ity izay manondro ny fiakaran'ny fangatahana sy ny hetahetan'ny dia ho avy.
Nahazo vahana be ihany koa ireo mpandresy satria solontena manerantany amin'ny media sosialy, miaraka amin'ny atiny isan'andro amin'ny sehatra maro.
Fizahan-tany azo antoka: Manatsara ny fepetra ara-pahasalamana i Seychelles
Hevitra momba ny vy manaikitra Pro-Fisolokiana ve izany? Voamarina ny fahamarinan'ny mpanjifa!
59 minitra lasa izay